Mutungamiri weSouth Africa, VaRamaphosa, Vokurudzira VaChamisa Kutambira Zvakabuda Mudare
Nyamavhuvhu 29, 2018
Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, lors d'une conférence de presse à l'issue du sommet des BRICS à Johannesburg, le 27 juillet 2018.
JOHANNESBURG, S.A —
Mutungamiri weSouth Africa, vaCyril Ramaphosa, vanoti mutungamiri MDC Alliance, VaNelson Chamisa, vanofanirwa kutambira mutongo wakabuda mumatare edzimhosva wekuti VaEmmerson Mnangangwa ndivo vakasarudzwa kuve mutungamiriri wenyika.
Vachitaura mushure mekutoreswa mhiko kwaVaMnangangwa, VaRamaphosa vanoti kukundwa kwaVaChamisa hakufanire kudzora kubudirira kwenyika mumashure.
VaRamaphosa vanoti musarudzo dzose dzinoitwa, pane vanokunda vamwe vachikundwa, asi izvi hazvirevi kuti ndipo panenge paperera sarungano kune avo vanenge vakundwa musarudzo.
Vachitaura kekutanga neMugovera, VaChamisa vakati ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika, kunyange hazvo dare reConstitutional Court rakati VaMnangagwa ndivo vakakunda.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Va Gideon Chitanga, vanoti mashoko aVa Ramaphosa anoratidza kuti nyika dzakatenderedza Zimbabwe, dzakazvipira kushanda pamwe nehurumende yaVaMnangagwa.
VaChitanga vanoti havaone VaChamisa vachisvika kure nenyaya yavari kuda kuramba vachisimudzira, uyewo havaoni mhuri yeZimbabwe ichiramba ichiratidzira kusafara kwayo nezvakabuda musarudzo iyi.
Asi zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muSouth Africa, kusanganisira vemapato anopikisa, havazi kutenderana nemashoko aVa Ramaphosa. Vazhinji vavo vanoti ichokwadi kuti VaChamisa ndivo vakakunda musarudzo iyi.
Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muMDC Alliance mudunhu reJohannesburg, VaSimbarashe Mujeyi, vanoti zvagara zvechizivikanwa kuti VaRamaphosa mutsigiri mukuru weZanu PF.
Mutungamiri webato reProgressive People's Party, VaTimothy Chiguvare, vanoti VaRampahosa havana kodzero yekuwirirana nehutongi hunotsigira vanhu vanotyora kodzero dzevanhu.
Machechi emuZimbabwe ari kukurudzira kuti VaMnangagwa vatambanudze zvechokwadi ruoko rwavo vachikoka zviri pachena VaChamisa kuti vashande vose nokuti vaviri ava vane rutsigiro rwakaenzana pachitariswa zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika.